Dinger | Home
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆန်းသစ်သော ငွေပေးချေမှု
ယခုဘဲ သင့် ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေ မှု အစုံမှ ငွေလက်ခံလိုက် ရ အောင်။ software developer တစ်ယောက်မှ မရှိတောင် ငွေလက်ခံနိုင်နေပါပြီ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စိတ်ချရတဲ့ finanial platform
အချိန်တိုတိုနဲ့ လွယ်လွယ် ကူကူ သင့် လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့လိုက်ရအောင်။
ကျယ်ပြန့်သော အကျိုးတူမိတ်ဖက် များ
ဝယ်သူများအတွက် စုံလင်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများပေးထားခြင်းက သင်၏စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
လွယ်ကူ သော ချိတ်ဆက်နိုင်မှု
API တစ်ခုတည်းနှင့် စုံလင်သောငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံနိုင်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ရခြင်းကို လျှော့ချပြီး ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်သာ အလွယ်တကူ လျှောက်လွှာတင်နိုင်သည်။
မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွက်ကိုမဆို ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဈေးနှုန်းကိုသာ ဖော်ပြထားသည်။
ဘဏ်များ နည်းတူ လုံခြုံမှုရှိခြင်း
သင်၏လုပ်ငန်းအတွက် လုံခြုံမှုမြင့်မားသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သော ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာစာရင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြန်လည်အပ်နှံပါမည်
The best choice to connect with us.
Dinger ကို အသုံးပြုရတာ Data တွေကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း အမြဲပြန်ကြည့်နိုင်ပြီး Receipt လည်းထုတ်ရတာ အဆင်ပြေတာကြောင့် Manpower အရမ်းသက်သာစေပါတယ်။
Payment Options တွေ အစုံအလင်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်လည်း Mobile Banking သုံးတဲ့ Users တွေသာမက၊ Online Card သုံးတဲ့ Users တွေ၊ Digital Wallets Users အတွက်လည်း အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။
Fashion Industry ထဲက တခြားသော Local Brands တွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း Dinger ကို အသုံးပြုကြည့်ဖို့ Recommend လုပ်ချင်ပါတယ်။
Ko Htet Myat Soe
Founder of High Cultured Myanmar
Dinger မှာ Payment platform အစုံအလင်ရှိပြီး Dinger Website ရဲ့ Dashboard ကို အသုံးပြုရတာ အရမ်းလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
Issue or Error တစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်း ချက်ချင်းကို Response လုပ်ပေးပါတယ်။
Founder of SAYA : The English Learning App
The major benefits of Dinger are time-saving, easy to use, can check transactions anytime just with your phone or desktop, or laptop.
Dinger has various types of payment platforms so I would like to recommend merchants and business owners use Dinger.
Ko Lin Htut Nyan
Founder of Youth Career Institute
Dinger isagreat platform to use regarding online payments and fees. As there are various mobile banking and e-payment systems, we needasolidifying online payment platform like Dinger to easily receive payments in one place.
At Parami, we are able to collect deposits and payments from students using Dinger. We can also check the data easily online on the dashboard or offline on the excel sheets. Dinger is quite convenient to use, especially during this time when e-commerce and online payments are heavily used.
Director of admissions and student affairs, Parami University
Asadigital payment gateway - team competency, industrial standard security level, easy and flexible in integration and prompt supports are key to commit the service quality. Dinger is the one which provides these key services in one - go to their customers.
Availability of multiple payment providers with one integration especially with local MFS platforms gives not only for its customers in easy integration but also the end - users for better payment processing experiences. If you need to integrate with multiple payment providers , Dinger will be your best choice.
Marnn Toe Oo
Founder & CEO , EDKA Digital